AMBOHIDRATRIMO: FITOKANANA NY KIANJA MANARAPENITRA – Ministère de la Jeunesse et des Sports
AMBOHIDRATRIMO: FITOKANANA NY KIANJA MANARAPENITRA
Notokanana anio Alakamisy 10 Jona 2021, ny kianja manarapenitra tao AMBOHIDRATRIMO, faritra Analamanga.
Mizotra mankany amin’ny fandrosoana tokoa ny firenena raha eo amin’ny lafiny fanatanjahantena no resahina satria dia kianja manarapenitra roa amin’ity kianja ity izao no vita sy notokanana tao anatin’ny fotoana fohy monja.
Kianja izay mahazaka mpijery miisa 1000, manaraka ny fenitra iraisam-pirenena, ary tafiditra tanteraka ao anatin’ny fanatanterahana ny velirano faha 13 nataon’ny Filoha Andry RAJOELINA.
Tonga nanatanteraka izany fitokanana izany ny Filoham-pirenena hajaina Andry RAJOELINA izay notronin’ny Minisitry ny Tanora sy ny fanatanjahantena, ny Governoran’Analamanga, ny Ben’ny Tanàna ao Ambohidratrimo, sy ireo Ben’ny Tanàna maro hafa.
Nandritra ny lahateniny, Andriamatoa Minisitry ny Tanora sy ny Fanatanjahantena, TINOKA Roberto, dia nanolotra fisaorana sy fankatelemana ho an’Andriamatoa Filoham-pirenena Andry RAJOELINA noho izao fotodrafitrasa manarapenitra izao, izay afaka mandray lalao iraisam-pirenena. « Voninahitra lehibe izao fampitovian-jo ny zanaka malagasy sy ny mpitia fanatanjahantena izao satria samy zanakao izy ireo », hoy izy. Nitondra hafatra ho an’ny Ben’ny Tanànan’ Ambohidratrimo sy ny vahoakany ihany koa ny tenany amin’ny tokony hikojakojana sy hanajana ity kianja manarapenitra ity. Ary nohamafisiny fa fitantanana telo lafy no hiandraikitra ity kianja ity, izany hoe ny Ministera ny Tanora sy ny Fanatanjahantena, ny Governora ary ny Kaominina .
Nandritra ny fandraisam-pitenenana nataon’ny Filoham-pirenena no nanehoany ny hafaliany sy fahavononany hanohy ny ezaka rehetra efa vita hatrizay ho fampandrosoana ny tontolon’ny fanatanjahantena amin’ny faritra rehetra.
« Tsy maintsy mandroso Madagasikara, ary anisan’izany ny distrika », hoy izy.
Taorian’izay, dia niarahaba sy nirary soa ny mpilalao sy mpanazatra ary mpitantana ny Barea manokana ny tenany, ary nisaotra azy ireo tamin’ny ezaka izay efa nataon’izy ireo. « Ny Fitondram-panjakana sy ny vahoaka malagasy tsy vaky volo dia ao an-damosinareo Barea ary manohana anareo hatrany ».
Teo am-pamaranana dia nanolotra fanamiana sy baolina ho an’ny mpanao fanatanjahantena ny Filoha ka ny Ben’ny Tanàna no hisahana ny fizarana izany.